वलीप्रथाले धार्मिक हैन अधर्मी र पाशविक बनाइरहेकोछ
Created on Sunday, 17 October 2010 12:40
अचम्म छ , हामी नेपाली यति हिंसक र अपराधि छौं कि आफ्नो जिव्रोको स्वादको लागि भगवानको नाममा निर्धा पशुको वध गर्छाै ।
यसपालिको दशैंको पूर्वसन्ध्यामा पशुअधिकारकर्मी लगायत देशका दिग्गज ब्यक्तित्वहरुले पशुवलीको विरुद्ध ठूलो क्याम्पेन चलाएकाथिए । तर कसले सुन्छ, सुनिएन । यसपाला पनि देशभरका मठ मन्दिरमा , शक्ति पीठहरुमा लाखौ प्राणीले आहुती दिनुपर्यो । पाशविक मान्छेले आफनो जिब्रोको लागि ती निरिह प्राणीलाई कथित
भगवानको नाममा छपाछप छिनाले ।
म दशैंको नाममा हुने कथित बली जसले देवीलाई खुशी तुल्याइने गर्छ, प्रति एकरत्ति विश्वास गर्दिन । शास्त्रकै कुरा गर्ने हो भने सनातन कुनैपनि शास्त्रमा देवी देउतालाई अर्काको ज्यान लिएर खुशी हुन्छन् भन्ने लेखिएकैछैन त्यो त लोभी पण्डाहरुले आफ्नो झोला भर्न दिएको तर्क मात्र हो । यसमा सत्ताको पनि स्वार्थ लुकेका हुन्छ ।
तर हामी त्यो यथार्थ मान्दैनौ । हामी त्यहि नेपाली हौं जसलाई विश्वभर मान्छे मार्ने क्रुर हत्याराको रुपमा बेलायती राजले प्रचारप्रसार गरयो । हामी शान्तिप्रियलाई विश्वमै हिंसक प्राणीको रुपमा प्रचार गरियो । तर हामी मख्ख परयौं । विशेषत: नेपालका मठ मन्दिर यहाँका आदिवासीहरुका प्रकृत्तिपूजक शान्त मठ थिए कुनै बेला । तर सत्ताले त्यसमा राजनीतिकरण गरयो । उनीहरुलाई जर्वदस्ती हिंसामा लट्पटिन बाध्य पारयो । दशैं हिन्दुहरुको चाड मानिन्छ तर हिन्दुधर्म आएको भनिएको भारतमा नवरात्र भर कुनै हिंसाकर्म गरिदैन । फलाहार बसेर दशैं मनाइन्छ । हामीमा कसले घुसायो यस्तो पाशविक प्रथा भन्ने कसैले खोज्न चाहेको देखिदैन ।
आफुलाई गणतन्त्रवादी भन्नेहरुले समेत हिंजो शाहीकाल, राजा महाराजाहरुले जनतालाई युद्धमा पठाउन हिंसक बनाउने राजनीतिबाट आएको यस्तो प्रथालाई खुरुखुरु पछ्याइरहेकाछन् । भनिन्छ, प्रश्न नगर्ने वा गर्न नसक्ने मान्छे नै हैनन् । त्यो जिवात्मा होइन । तर यस्तो लाग्छ, नेपालीहरु प्रश्न नै गर्न सक्दैनन् ।
सबै दासताको यस्तो माखेसाड.्लोमा फसेकाछन् कि त्यसबाट मुक्त हुने सोंच समेत देखिदैन । यहाँ भनिएला, उसो भए मासु नै नखाने त रु तर त्यसो भन्न खोजिएको होइन । आफ्नो आवश्यकता एक ठाँउमा छ तर मोजमस्ती गर्न अर्काको ज्यान हरेर त्यो पनि देउताको नाम लिएर कति घृणित छ ? नेपालीहरु जसले वली प्रथालाई पछ्याइरहेकाछन् उनीहरु वास्तविक रुपमा दैवी भक्त नै होइनन् । नत्र खुल्लमखुल्ला आफले पुज्ने देवीको अगाडि आफ्नो जिब्रोको लागि यत्रो झुठको पुलिन्दा बाँध्ने नै िथएनन् । यस्तो झुठ कर्म गर्न सिकाउने भक्तजनहरुले आफ्ना सन्ततिलाई कसरी धर्म मार्गमा लगाउलान् । बदमासी गर्न सिकाइने यस्तो चालाले हाम्रो समाजमा पतितहरु नजन्मेर कहाँ जन्मिएला ? अपराध , चोरी नबढेर के अपेक्षा गर्न सकिएला ? धर्मको नाममा हुने यस्तै वदमासीका कारण मान्छेहरु धर्मको वास्तविक शिक्षामै विश्वास गर्न छाडेकाछन् । नास्तीकहरुको संख्यामा बृद्धि भैरहेकोछ । यस्ता कर्मले धर्मको बिस्तार गर्देन झन खुम्च्याँउछ । त्यसैले देशमा बदमासहरुको बाहुल्य बढिरहेकोछ । केहि राम्रो भैरहेकोछैन ।